Thursday February 28, 2019 - 15:00:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
laba maalmood ka hor degaanka Xaawa Cabdi oo u dhow Ceelasha Biyaha waxaa ka dhacay arrin naxdin leh kadib markii dabley hubeysani ay toogteen Sagaal ruux oo geed qaad ku sameynayay dhul halaas ku yaalla waxaana sagaalkaas kamid ahaa lix haween ahi.
Arrintan ayaa waxaa kasoo baxayay warar kala duwan balse aqoonyahan sharci yaqaan ah oo lagu magacaabo Maxamad Xassan ayaa sheegay in dhacdadan ay lamid tahay kuwa sannadihii ugu dambeeyay kusoo laalaabanayay deegaanka waxaana uu sababteeda dusha uga tuuray DF.
Aqoonyahanka ayaa sheegay in qadiyadan ay la xiriirto dhulalka waxa ugu wacanna ay tahay dowladda oo dad badan usoo sharciyeysa hal dhul ama shirkado ay ka iibisay dhulal ay dad kale leeyihiin taasna ay sababto in ay dhacaan wax lamid ah wixii shalay ka dhacay deegaanka Xaawa Cabdi.
Wuxuu bulshada ku dhaqan degaannada Ceelasha iyo kuwa ku dhow kula taliyay in aysan ku dagaalamin wax ay odayaashooda xallin karaan ama ay maxkamadaha wilaayaadka u bandhigan karaan isagoo ugu dambeyntii u tacsiyeeyay dadkii maatida ahaa ee lagu laayay degaanka Xaawo Cabdi.
Halkan Ka Degso Wareysiga Aqoonyahan Maxamad Xassan